10 su'aalood oo la waydiiyo taariikhda ugu horeysa
Taariikhda koowaad had iyo jeer waa mid xiiso leh oo xiiso leh. Laakiin aan run sheegno: tani sidoo kale waa shaqo dhab ah. Caadi ahaan wax kastaa waxay ku bilowdaan si caadi ah, iyadoo su'aalo la weydiinayo xaggee ka timid? ama maxaad qabanaysaa? iyo qoraalo kale. Iyaguna, waxaad arkaysaa, inay yihiin kuwo aan faa'iido lahayn oo sinaba ugama caawiyaan wada sheekaysiga xunxun.
Saynis yahano Maraykan ah ayaa ogaaday A. Aron, E. Melinat et al. Jiilka Tijaabada ah ee Xidhiidhka Shaqsiyeedka: Habka iyo Qaar ka mid ah Natiijooyinka Horudhaca ah / Shakhsinimada iyo Cilmi-nafsiga Bulshada ee sheegaya su'aalaha saxda ah ee taariikhda koowaad waxay si weyn u xoojin kartaa xiriirka ka dhexeeya dadka. Haddii aad kaliya isu diyaarinayso inaad la kulanto qof aad jeceshahay, isku day inaad ka fogaato qaabkaaga caadiga ah oo isticmaal 10kan sadar ee fudud.
1. Sidee u aragtaa xiriir ku habboon?
Jawaabtu waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto waxa uu nin ama gabadhu ka raadinayaan lammaane iyo xiriirka. Noqo lamaane isku filan oo isku filan, dhisa iskaashi miisaaman oo fikir leh, sida ganacsiga, ama waxaad noqon kartaa qoys dhaqan ah oo uu ninku shaqeeyo, gabadhuna ay tahay ilaaliyaha dabka.
Isla markiiba ha ka hadlin rabitaankaaga. Si taxadar leh u dhegeyso qofka kula hadlaya Sidan ayaad ku ogaan doontaan inaad midba midka kale ku habboon tahay ama haddii aad ku kala aragti duwan tihiin mustaqbalka.
2. Ma jiraa qof u maleynaya inuu hadda ku shukaansado?
Su'aashan kicinta ah waa in la is weydiiyo, laga yaabee xitaa kaftan, laakiin weydii. Qofna xaqiiqdii uma baahna xidhiidh qofka aan si buuxda u ogaan noloshiisa gaarka ah iyo hiwaayadaha hore.
Akhri sadarrada dhexdooda. Haddii lammaanahaaga shukaansiga uu sheego inay qabaan nin hore ama hore oo waalan oo weli fariin qoraal ah oo soo bandhigaya albaabkooda, waxaa jira fursad yar in dhammaan weedhahan ay yihiin kaliya code-ka Waxaan marmar wada seexannaa.
3. Maxaa kaa farxiya?
Xiriiro caafimaad qaba ayaa ka dhex dhaca lamaanaha halkaas oo qof walba uu garanayo waxa ka farxiya. Lammaanaha kuma qasbana inuu mas'uul ka yahay niyaddayada wanaagsan, waa inaan awood u yeelanno inaan si madax-bannaan u kobcino nafteena jacaylka nolosha.
Weydii qofka aad shukaansaneyso inuu ka hadlo waxyaabaha uu xiiseeyo. Haddii isaga ama iyadu ay qoslaan oo ay quudhsadaan arrinta, taasi waa calaamad xun. Horeba marxaladda taariikhda ugu horreysa, waxaad xiiseyneysaa waxyaabo kala duwan. Ma aha bilowga ugu fiican ee xiriirka.
4. Sidee u aragtaa guur-guurka?
Haddii aad rabto in aad xidhiidh noocaas ah uun samayso, uma baahnid in aad ka xishootid. Qofkii kula heshiiya su'aasha kama joojinayo, laakiin waxay kaa caawinaysaa inaad isla markiiba macsalaamayso qof aan kugu habboonayn.
Isku day inaad si ciyaareysan wax u weydiiso, sida haddii ay u dhexeyso waqtiyo. Oo haddii aadan soo dhaweyn hal-guurka, weydii su'aal la mid ah, laakiin markan ku saabsan guurka badan. I rumayso, waxaa aad u wanaagsan inaad ka hadasho arrimahan ka hor inta aadan xiriir la gelin.
5. sidee tahay?
Haddii aad u baahan tahay inaad ka tagto hal su'aal oo fudud, markaa tani waa doorasho guul-guul ah. Si kasta oo ay u dhib badan tahay, tani waa wada sheekeysi wanaagsan oo si fudud kuugu hogaamin doona mowduucyo kale oo xiiso leh oo kaa caawin doona inaad si fiican isu barataan.
Alexandra Solomon Cilmi-nafsiga kiliinikada, qoraaga geesinimada jacaylka. 20 casharo is ogaansho ah oo kaa caawinaya inaad hesho jacaylka riyadaada.
Taariikhda koowaad ee guuleysta waxay u baahan tahay laba qof oo diyaar u ah wadahadal dhab ah, ma aha su'aalo taxane ah oo wareysi u eg. Inta shirku socdo, ha is weydiinina mowduucyo kala duwan, si wada jir ah uga wada hadla.
Kelmado sidee tahay? inta badan waxay kugu filan tahay inaad bilowdo wada hadal aad ku milmi karto. Hagaag, jawaabta monosyllabic xaqiiqdii maaha calaamadda ugu fiican ee mustaqbalka qofkan.
6. Haddii xayawaanku wada hadli karaan, kee baa ugu qallafsan?
Waa su'aal yaab leh, laakiin jawaabteedu waxay wax badan ka sheegi kartaa qofka. Dareenkiisa ugu horreeya wuxuu ku tusi doonaa sida uu ugu daran yahay nolol maalmeedka. Ama waxaa laga yaabaa inay soo baxdo in hortaada ay tahay nafta shirkadda, oo si habboon u toogtay kaftan midig iyo bidix.
Su'aasha qosolka leh ee noocan oo kale ah ayaa ku ogeysiin doonta sida uu qofku u ciyaaro, haddii aad kaliya ku qosli karto oo aad dareento dabacsanaan isaga ama iyada.
Taariikhaha ugu horreeya, hababka difaaca ayaa badanaa la kiciyaa, gaar ahaan haddii aad hore u xanuunsatay. Waxayna dilaan jacaylka kaliya. Iyo su'aashan oo kale, liddi ku ah, waxay soo celin doontaa dareenka hal-abuurka, madadaalo iyo tomfoolery.
7. Maxay yihiin saddexda sifo ee ugu muhiimsan ee aad ka raadiso lammaanaha?
Way fiicantahay inaadan dhisin dhalanteed, laakiin isla markiiba la ogaado inaad midba midka kale ku habboon tahay iyo in kale. Weydii sida uu u arko lamaanahaaga iyo sifooyinka uu u arko inay neceb yihiin.
Haddii aysan jirin jawaab cad oo su'aasha ah, markaa la-taliyahaagu maaha mid dhab ah oo ku saabsan xiriirka ama weli ma ogaan waxa uu ka rabo iyaga. Tani maaha meesha ugu fiican ee laga bilaabo urur caafimaad qaba.
8. Sideed u malaynaysaa maalin kaamil ah?
Tani waxay la mid tahay su'aasha ku saabsan hiwaayadda, kaliya waxay sidoo kale muujineysaa qaab nololeedka qofka.
Maqal sida lammaanahaaga shukaansiga u arko maalinta ku habboon, firfircoon ama deggan, ficil ka buuxa ama dabacsan, oo ka fiirso haddii aad rabto inaad ka mid noqoto noloshaas.
9. Waa maxay xiriirka aad la leedahay waalidkaa?
Su'aashani waxay dhab ahaantii qarinaysaa mid kale: Waa maxay jacaylka aad aragtay? Dhammaanteen waan ognahay in qaabka qoysku uu yahay carruurnimada, iyo xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo aabaha ayaa si weyn u go'aamin kara nolosheena gaarka ah.
Xidhiidhka qoyska ee diirran ayaa had iyo jeer qofka ka dhiga mid niyad ahaan iyo maskax ahaanba deggan, iyo sidoo kale isku-kalsoonida. Laakiin haddii aad ogaato in wax waliba aysan ahayn mid aad u qurux badan, tani maaha sabab aad isla markiiba u cararto oo aad u jarto isgaarsiinta, ka dib oo dhan, xaaladuhu way ka duwan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, su'aasha fudud sida tan waxay noqon kartaa furaha fahamka xiriirkaaga mustaqbalka.
10. Weli ma la xidhiidhaa saaxiibbadaa carruurnimada?
Jawaabta su'aashan waxay ku siin doontaa fikrad ah awoodda qofku u leeyahay inuu ku sii jiro xiriirka muddo dheer. Intee in le'eg ayuu la xiriirinayay kuwa uu jecel yahay ee hadda ku hareeraysan? Miyuu la xidhiidhaa saaxiibbadii hore? Haddi isgaarsiintu go’an tahay maxay tani u dhacday muxuuse ka odhan karaa asxaabtiisii ​​hore?
Si loo abuuro midow caafimaad qaba, lammaane kastaa waa inuu lahaado nolol xiiso leh oo u gaar ah. Haddii kale, hal qof ayaa ku milmi doona mid kale, oo xiriirka noocaas ah wuxuu caadi ahaan ku dhamaadaa fashil.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 10 su'aalood oo la waydiiyo taariikhda ugu horeysa!